Fijerin’ny olona ao Azia Afovoany: Mandeha an-tany tsy fantany ny ONG kirkizy iray mpisava làlana · Global Voices teny Malagasy
Fanangonana rakitra tao Azia Afovoany, mbola avo be ny fahatsapàna
Voadika ny 17 Avrily 2022 13:33 GMT
Asa eny an-kianja ao Kyrgyzstan, sary an'ny Central Asia Barometer (CAB), nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Raha toa ka manana zavatra betsaka iraisany ireo firenena ao Azia Afovoany: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan sy Uzbekistan, dia mbola eritreritra fotsiny ny firaisan'ny ao amin'ny faritra fa tsy tena izay no zavamisy akory: Zara raha mahafantatra momba izay mpifanolo-bodirindrina aminy ireo vondrompiarahamonina eo an-toerana. Saingy misy vondrona mpikatroka avy ao Kyrgyzstan mino fa fotoana izao hiresahana momba ny fomba fijerin'ireo olona ao Azia Afovoany amin'ny ankapobeny.
Manan-javatra maro iraisany ireo firenena dimy ao Azia Afovoany: sisintany iraisana, ny fisian'ireo vitsy an'isa avy amina vondrona foko iray mibahan-toerana any amin'ny firenena tsirairay, nandritra ny taompolo fito teo ambany fitondràna sôvietika, fifanakaikezana ara-pitenenana ho an'ireo miteny tiorka (izy rehetra ankoatra an'i Tadjikistàna), mpiray vodirindrina mitovitovy samy maniry daholo ny hametraka dindo ao amin'ny faritra (Rosia, Shina, Tiorkia), ary fikisahana ara-toekarena faobe (indrindra fa nankao Rosia sy Tiorkia). Izy rehetra mitambatra dia ahitàna vahoaka miisa 70 tapitrisa mahery.
Kanefa, singa marobe no mitazona ireo sisintany hihidy, izay manakana ny hipoiran'ny maripamantarana iray matanjaka ao amin'ilay faritra, na ny fisiana fihetsehampo hoe miray lahatra sy anjara: ny hambo pôlitikan'ireo mpitarika eo an-toerana tsy dia mihevitra loatra ny hifandray amin'ireo mpifandray vodirindrina mivantana, fifandonana ateraky ny resaka foko sy ny loharanon-karena voajanahary na angovo, olan'ny sisintany tsy voavaha fony Firaisana Sôvietika (isan'ireny ireo faritany), tsy fitoviam-pijery amin'ny fifandraisana amin'i Maosko sy Bejing, ary fihetsik'ireo governemanta samihafa manoloana ny finoana Silamo, ankoatra ny hafa.
Kanefa, ny zavatra niainan'ny sarangan'ireo olona antonontonony dia mijanona ho mitovitovy ihany any amin'ireo firenena dimy, ary nanapaka hevitra ny ONG iray miorina ao Bishkek any Kyrgyzstan ny hihevitra an'i Azia Afovoany ho toy ny iray tsy mivaky mba handalinany ireo fironana sôsialy, toekarena ary pôlitika manerana ilay faritra.
Global Voices dia nitafa tamin'i Kasiet Ysmanova, tomponandraikitry ny fampivoarana ao amin'ny Central Asia Barometer (CAB) mba hahafantarana misimisy kokoa momba ireo fanamby atrehan'ireo fikambanana mikaroka eny an-kianja momba ny fomba fijerin'ny olona isam-paritra. Araka ny fanazavàny, tamin'ny 2012 no najoron'ireo mpikaroka marobe sy ireo namana mpankafy an'i Azia Afovoany ilay fikambanana. Ny zava-nisy tamin'ny 2017:
Tamin'izay taona izay, natomboky ny CAB ny tetikasany fanadihadiana misokatra, tsy tapaka, in-droa isantaona, mahahenika ny firenena. Voalohany, natombokay tamin'ny fanadihadiana nifanatrehana nivantana, avy eo nikisaka ho amin'ny telefaona tamin'ny 2020 noho ny fisian'ilay valanaretina. Nampianay tsikelikely firenena vaovao, ary amin'izao fotoana izao dia voarakotray daholo ireo firenena dimy. Ny tanjonay dia ny hanao fanarahamaso misokatra isankerinandro momba ny fomba fijerin'ny olona any amin'ny firenena rehetra momba ireo olana atao lohahevitra. Ahafahanay manatanteraka feno ny iraka tontosainay amin'ny maha-Central Asian Barometer anay io, amin'ny fandrefesana ny rivo-piainana pôlitika, sôsialy sy toekarena ao amin'ny faritra.
Ho an'i Ysmanova, iray amin'ireo tetikasa mampientanentana indrindra ny mandrefy ny fandehan'ny fifandraisan'ireo firenena dimy ao Azia Afovoany. Araka ny fanazavàny, mety hanampy ny governemanta sy ireo andrim-panjakana hafa io mba hanarahana maso ireo fironana samihafa manefy ny fifandraisan'ireo olompirenena avy amin'ireo firenena dimy ireo.
Nanontanian'ny Global Voices azy ihany koa ny momba ireo fanamby fototra atrehana rehefa manangona rakitra manerana ireo fiteny sy firenena samihafa. Maiky i Ysmanova fa tsy asa mora izany:
Avo be ny fahatsapàna momba ireo lohahevitra sasantsasany toy ny pôlitika ary ny finoana: ao Turkmenistan, Tajikistan ary Uzbekistan tsy afaka atao ny mametraka fanontaniana momba ny pôlitika anatiny sy ivelany, ny finoana, ny fanaovana an-tendrony sy ny asa fampihorohoroana. Ny fametrahana ireny fanontaniana ireny dia mety hampidina ny tahan'ny valinteny sy ny olàna iarahana amin'ireo masoivohom-piarovana any amin'ireny fanjakàna ireny. Malalaka kokoa izahay ao Kazakhstan sy Kyrgyzstan.
Fa misy ihany koa ireo fanamby teknika: tsy dia fahaiza-manao loatra ananan'ireo andrim-panjakana manerana an'i Azia Afovoany, izay, araka ny fanazavàny, ahitàna ny tsy fahafahana manao fitsapankevitra amin'ny alàlan'ny telefaona ao Turkmenistan, ary ny fahasarotan'ny fahitàna matianina voaofana hanao asa eny an-kianja, hiasa toy ny hoe mpanome tolotra telefaona, mpanadihady, na mpanafàna fifanakalozan-kevitra afantoka amina lohahevitra. Midika io fa tsy maintsy manofana ireo olona ilainy hanao ny asa ny CAB ary manamarina ny kalitao sy ny fahamarinan'ny rakitra azo. Ankoatry ny lalàna ratsy sy ny faharatsian'ny aterineto, mbola manahirana ihany koa ny fidirana, izay mitàna anjara toerana ihany koa amin'io.
Raha jerena ny lasan'ny Firaisana Sôvietika, iraisan'ny faritra ireo ahiahy ankapobeny amin'ny antony anaovana fanadihadiana mahakasika vondrona iray sy izay mety ho antony afenina ao ambadika ao, araka izay izaràn'i Ysmanova azy:
Matetika izahay no maharay antso na hafatra avy amn'ireo olona mpiresaka aminay manontany amim-pitandremana ny antony anadihadianay ny olona, indrindra fa momba ireo lohahevitra tena mamay. Satria ambany ny haavon'ny fanentanana amin'ny resaka fikarohana ara-tsôsialy any amin'ireo firenena ireo, tsy dia mibaribary loatra amin'ny olona rehefa miteny izahay hoe ampahany amin'ny tetikasanay fkarohana ara-tsôsialy no anatontosànay ireny fanadihadiana ireny.
Marina manokana io ho an'i Turkmenistan, iray amin'ireo firenena mihidy indrindra, tsy ao Azia Afovoany ihany, izay toerana tsy ahafahan'ny CAB mametraka fanotaniana somary amin'ny ankapobeny mety hanome topimaso momba izay iainan'ny olona ao amin'ny firenen-dry zareo.
Raha raisina ny fitomboan'ny mponina ao Azia Afovoany, izay mety hahatratra 100 tapitrisa hatramin'ny 2050, ny anjara toerana notànany tao anatn'ilay Hetsika Hetra (vakio hoe fehikibo) sy Làlana tao Shina, ary, ny akaiky indrindra, dia ny fandraisana ireo andiana fifindràmonina avy ao Rosia taorian'ny fananihambohitra nataon'i Maosko tao Okraina, ho lasa misy lanjany kokoa ny fanànana hevitra momba izay fomba handanjàn'ireo ao Azia Afovoany ireo fiovàna lehibe ara-toekarena, pôlitika, fahasalamam-bahoaka ary ara-tontolo iainana.